♦အပူပိုင်းအစားအစာသာသနာသင် 45 ရက်ပေါင်းမှတက်ဘို့အတွင်း၌သိုလှောင်မဆိုအခြောက်အအစားအစာ၏လတ်ဆတ်သောထိနျးသိမျးဖို့သေတ္တာကလေးတခုတခုအပေါ်မှာလုံတံဆိပျကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။
ခြောက်သွေ့သောအစားအစာများ (သီးနှံ, လမ်းကြောင်းရောနှော, သကြားလုံး, granola, အခွံမာသီး, ပဲ, ဆန်) ၏ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံတို့အတွက်♦သင့်တော်
♦အဘို့ကိုထိန်းချုပ်သည့်စနစ် - တစ်ဦးချင်းစီလှည့်ကွက်တစ်ခုအောင်စနှင့် ပတ်သက်. ယွင်းဘော်
ဤရွေ့ကားကို dual သာသနာသေတ္တာကလေးတစ်ဦးချင်းစီခြောက်သွေ့တဲ့အစားအစာမျိုးစုံ၏ 17.5 အောင်စ (500 ဂရမ်) မှတက်ကိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားသီးနှံ, oatmeal, သကြားလုံး, granola, အခွံမာသီး, ပဲ, စပျစ်သီးပျဉ်, ဆန်, ခေါက်ဆွဲ, ခွေးအစားအစာ, ကြောင်အစားအစာ, ပျားရည်, ချောကလက်, လမ်းကြောင်းရောနှော, ကော်ဖီပဲ, အေးခဲအခြောက်လှန်းအသီးနှင့်ပိုပြီးသင့်လျော်ဖြစ်ကြသည်။
17.5 x ကို2အောင်စ
စက္ဏူထူနှုန်း 8 အစုံ
အစားအစာအမျိုးမျိုး FOR 1.USE:
ဤရွေ့ကားကို dual သာသနာသေတ္တာကလေးခြောက်သွေ့သောအစားအစာများ၏ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံ၏ 17.5 အောင်စ (1 ဂါလန်) မှတက်ကိုင်နိုင်ပါတယ်။
ဤရွေ့ကားသီးနှံ, oatmeal, သကြားလုံး, granola, အခွံမာသီး, ပဲ, စပျစ်သီးပျဉ်, ဆန်, ခေါက်ဆွဲ, ခွေးအစားအစာ, ကြောင်အစားအစာ, ပျားရည်, ချောကလက်, လမ်းကြောင်းရောနှော, ကော်ဖီပဲ, အေးခဲအခြောက်လှန်းအသီးနှင့်ပိုပြီးသင့်လျော်ဖြစ်ကြသည်။
အပူပိုင်းအစားအစာသာသနာသင် 45 ရက်ပေါင်းမှတက်ဘို့အတွင်း၌သိုလှောင်မဆိုအခြောက်အအစားအစာ၏လတ်ဆတ်သောထိနျးသိမျးဖို့သေတ္တာကလေးတခုတခုအပေါ်မှာလုံတံဆိပျကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။
သင့်ရဲ့စားစရာခန်းထဲမှာအသစ်အဟောင်းသီးနှံ boxes တွေကိုတစ်စုပြုံပြွတ်သိပ်ရှိခြင်းကိုရှောင်ပါ။ ဤအသာသနာနှင့်အတူသင့်ရဲ့ခြောက်သွေ့တဲ့အစားအစာများကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖွင့်လှစ်အိတ်၌သူတို့ကိုစွန့်ခွာရန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လတ်ဆတ်ခြင်းနှင့်ပိုးအခမဲ့နေဖို့သေချာစေနိုင်သည်။ စားစရာခန်းနေရာလွတ်နှင့်ပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်အသုံးပြုသောနိုင်အာကာသကိုတက်ယူပြီးနှောင့်အယှက် boxes တွေကိုဖယ်ရှားပစ်ရ။
4.HIGH QUALITY တည်ဆောက်နေ:
ဤသည်ကို dual အရေးယူခြောက်သွေ့သောအစားအစာနှင့်သီးနှံသာသနာကိုလည်းဝတ်ဆင်ဒဏ်ခံတဲ့အကြမ်းခံခြစ်ခံနိုင်ရည်, shatterproof ဆောက်လုပ်ရေးပါရှိပါတယ်။ ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့အောက်ခြေယိုဖိတ်မှုဗန်းအမြန် cleanup နဲ့လျှော့ရှုပ်ထွေးမှုအတွက်ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဤရွေ့ကားသာသနာ setup ကိုနှင့်အသုံးပြုခြင်းမှမယုံနိုင်လောက်အောင်လွယ်ကူသောဖြစ်ကြသည်။ ရိုးရှင်းစွာအအလိုရှိသောကောင်တာမျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုနေရာနှင့်ကွန်တိန်နာနဲ့တံဆိပျသို့ခြောက်သွေ့တဲ့အစားအစာနှစ်သက်တဲ့ငွေပမာဏကိုသွန်းလောင်း။
အဆိုပါမျိုးတွင်အောက်မှာတစ်ပန်းကန်ချထားပါ, ပြီးတော့လှည့်ကွက်နှုန်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1 အောင်စ dispense ရန် crank ဖုလိမ်။ အဆိုပါအဘို့ကိုထိန်းချုပ်သည့်စနစ်အစားအစာများကိုနှိပ်စက်ခြင်းနှင့်ရှုပ်ထွေးယိုဖိတ်မှုကိုလျှော့ချမည်မဟုတ်ကြောင်းပျော့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လျှောဘီးကိုအသုံးပြုသည်။ ကလေးတွေကသူတို့ကိုယ်သူတို့ထမ်းဆောင်နိုင်နှင့်ဤသုံးပြီးကိုချစ်မည်!
2.We လည်းရှိ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ, နောက်ကိုလိုက်အဖြစ်တစ်ခုတည်းခြောက်သွေ့တဲ့အစားအစာသာသနာ။